Zụrụ Waterproof Shine & Matte ewute Eyeshadow Palette - Free Mbupu & Enweghị |tụ | WoopShop®
Waterproof enwu & Matte ewute Eyeshadow Palette
$ 7.99 Ịgachi price $ 13.99
Agba 02 1PC 03 1PC 04 1PC 01 1PC
ụgbọ mmiri ndị si China United States
Paịlị mmiri na-enwu gbaa & Matte ewute Eyeshadow Palette - 02 1pcs / China na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Ngwa: Onyinyo Anya
Uru: Na-adịte aka, dị mfe iji eyi, Eke, Waterproof / Water-eguzogide ọgwụ
Single agba / multi-agba: Anọ na agba
Imecha: ewute, Shimmer, Matte, aditọ, Natural, Satin
Mmiri mmiri / Mmiri na-eguzogide: Ee
Atụmatụ: mmiri na-adịghị, eke, dị mfe iji eyi, ogologo oge
Style: stylesdị 4
Arọ: obere palette-40g, eyeshadow set-335g
Size: Obere palette-8 * 6.5 * 1 cm, eyeshadow set-21 * 17.5 * 2.5cm
Ndụ ndụ: 3 afọ
Mfe ibu, Obere eyeshadow palette.
Anọ agba: isi agba, isi agba, halo dyeing, sequin mgbanwe.
Otu nke ụdị anọ, onyinye dị mma maka ụmụ nwanyị, ndị enyi nwanyị, ndị nne na ụmụnne nwanyị.
Ọ dị mfe ịdọrọ ndo ndị mara mma gburugburu anya na-adịru ogologo oge, ọ dị mma maka onye mbido.
Dabere na 16 nyocha
Niile dị mma
Ezigbo ngwa ahia, daalụ, ana m akwụ gị ụgwọ!
Ha tụbara ya ozugbo na igbe ozi. Bia ngwa ngwa. Ha adaghị, ọ bụ ezie na nkwakọ ngwaahịa ahụ (dị mma nke ukwuu) mana enweghị ntụkwasị obi ọbụlagodi pupyrki abụghị. Ma dị ka ndò dị mma, ọ naghị enwu gbaa. Ha anaghị anụ ihe ọ bụla. Ewute ude na-enwu ma na-ọma. Agbaara m anya m ụzọ dị iche iche iji hụ ihe dị ka ya. Ọ dabara m
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 73159.
Multifunction reusable Dolce Gusto nkwụnye N'ihi Nespresso Capsule
Super ga-m mgbe niile ịtụ dabara niile Nespresso capsules dị ọcha. Zuru okè.